ADY AMIN’NY HERISETRA SY FANOLANANA : Tontosa tao Andramasina ny hetsika fiarovana ny zon’ny ankizy
Manoloana ny tranga misesisesy mahakasika ny herisetra tsy tambo isaina mpahazo ny ankizy amin’izao fotoana izao dia voaporofo tamin’ny loha ranom-baovao voaray avy tao amin’ny Distrikan’Andramasina fa anisany miady hatramin’ny farany ny fametrahana sy fanatsarana ny zon’ny ankizy izy ireo. 13 avril 2018
Hita nibaribary tamin’ny hetsika nataon’ny mponina, notarihan’ny Lehiben’ny Distrika, Radaniela Andriamihaja Jaona izany ary nosokafana afak’omaly tontolo ny dinidinika sy fankalazana. Fivorian-dehibe no natao tamin’izany ka ny “Rafitra najoro hanatsarana ny zon’ny ankizy no tena anisany tompon’andraikitra tamin’ny fanatontosana izany, izay natrehan’ny besinimaro toy ny solon-tenam-piangonana, mpanabe, olom-pirenena tsotra ary ny teo anivon’ny fokontany.
Zava-dehibe maro no voadinika tamin’io fotoana io ka ny fiadiana ny zon’ny ankizy no tena nomasahina. Hita tamin’ny lohahevitra hoe “Isika rehetra miara-mientana miaro ny zon’ny ankizy”. Nomarihan’izy ireo tamin’io fotoana io hatrany fa nijoro ara-dalàna tamin’ny faha 20 septambra 2016 ny fisian’ity rafitra miaro ny zon’ny ankizy ity tao amin’ny Distrika ary manana tanjona goavana hampivoarana ny tanora sy ankizy ao amin’ny Faritra ireto farany.
Ankoatra izay dia tompon’andraikitra ny olona rehetra manoloana ny fomba fiainana ankehitriny satria maro loatra ny zava-misy iainan’ireo zaza madinika tsy ampy taona. Ohatra amin’izany ny tranga fanolanana etsy sy eroa eny anivon’ny fiarahamonina, ny fampiasana ankizy tsy ampy taona, ny famonoana ankizy amin’ny tsy ara-drariny ary ny maro hafa izay hita tokoa fa manome fangirifiriana ireo ankizy. Natao tao an-toerana moa ity hetsika sy fivoriam-be ity mba hanairana ny rehetra sy ho fanamafisana orina ny tetikasa sy ny rafitra napetraka efa novolavolaina hatramin’ny nijoroany tao an-toerana.